South Africa Tourism Minister: Marking nke mbụ maka Mmanya na Mgbakọ Nri
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » South Africa Tourism Minister: Marking nke mbụ maka Mmanya na Mgbakọ Nri
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • culinary • News • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Mmanya & mmuo
Nke izizi, mịnịsta gọọmentị mba ga-abịa kwa afọ Nzukọ Mmanya Mmanya & Food, mgbe Minista njem nleta na South Africa Mmamoloko Kubayi-Ngubane na-enye nnabata Mmanya Wine & Food Awards na Spier dị nso na Stellenbosch na Septemba 18, 2019.
Onye na-eme nzukọ ọgbakọ Margi Biggs kwuru na mịnịsta Kubayi-Ngubane mere atụmatụ na ọgbakọ ahụ gosiri mkpa mmanya na ngwa ngwa ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa. “Onweghi uzo ozo di egwu karie ka ndi njem gha enweta obi na nkpuru obi nke mpaghara, ihe okike ya, omenaala ya na ochicho ya karia site na mmanya ya na nri ya. Otú ọ dị, mmetụta ya dị ọtụtụ karịa. Ọ na-eweta ọrụ, na-ewulite nkà, na-emekwa ka ohere na ịdị mma nke obodo ime obodo ndị a na-adịghị ahụkebe dịrị iche iche. ”
Dabere na World Travel & Tourism Council, njem na njem niile dị na South Africa nyere ọrụ 1.5 nde na ijeri R425.8 na akụ na ụba na 2018, na-anọchite 8.6% nke ọrụ akụ na ụba niile.
Biggs kwuru na onyinye ndị a ga-ewepụtara na ogbako ahụ bụ iji mee ka ndị na-eme njem mmanya na ndị na-eme njem nlegharị anya na-azaghachi mgbanwe ụwa na ndụ, ụkpụrụ, na ihe ndị ka mkpa. “Ndị a bụ ndị mgbanwe mgbanwe na-eme ka ụlọ ọrụ anyị nwee asọmpi, mkpa, na nke uche nke ndị njem. Ha meputara ihe omuma di iche-iche echefu echefu mgbe ha na agwa ndi ahia ihe banyere gburugburu na nmekorita mmadu, omume oma, ahu ike na odi nma.
“Mịnịsta Kubayi-Ngubane isonye na ọgbakọ a bụ nkwenye nke ọrụ ha. Ọ bụ onye otu n'ime atụmatụ World Economic Forum nke enyerela aka ịkwalite mgbanwe nke ụlọ ọrụ nke anọ site na Council of Intelligence Council. Yabụ, anyị nwere olile anya ịmụta site n'echiche ya banyere ụfọdụ ụzọ AI na mmụta igwe na-esi amalite ịkụziri anyị banyere omume na mmasị ndị ahịa iji kọwa ma melite oke na ogo mmanya obodo na nri ndị njem. "
N'ikwu okwu banyere amụma United Nations World Travel Organisation (UNWTO) na-ebu amụma na uto mba ụwa na ụdị njem ọ bụla ga-abawanye 3 ruo 4% na 2019 ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, ọ sịrị: “Otu nnukwu ihe kpatara ya bụ nnweta nnweta nke njem ụgbọ elu. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime uto a nwere ike ikwu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị njem ụlọ na nke mba ụwa na-achọ ihe ọhụrụ n'ụdị ekpomeekpo na ahụmịhe na ịchọta ma n'ụba, ọkachasị na mba ndị na-emepe emepe. Ihe a ma ama na South Africa maka uru na ụdị dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ ebe na-adọrọ mmasị ma na-akọwa ihe kpatara ya ji bụrụ akụ na ụba njem nleta kachasị ukwuu n'Africa.
“Ndị na-enye njem nlegharị anya maka ị areụ mmanya n’obodo na-egosipụta ihe ọhụrụ ma na-emeghachi omume n’ụzọ dị mma maka otú ha si egbo mkpa mmanya na ndị bụ isi na ndị hụrụ nri n’anya, yanakwa ndị nwere mmasị n’omume, ụkpụrụ na-adigide, ọdịbendị, ahụike, na ahụmịhe ndị metụtara egwuregwu. Site na ọrụ aka ruo na eziokwu gbara ọkpụrụkpụ, ndị South Africa maara nke ọma n'ịmepụta na ịkọpụta ahụmịhe nke ụwa na ihe omume ndị na-ekwenye ọdịnala dị ogologo n'akụkụ nke kachasị ọhụrụ na teknụzụ. Ka a sịkwa ihe mere anyị ji nwee ụdị agbamume a na nnabata a site n'ọtụtụ nhoputa mbụ na nke na-atọ ụtọ. ”
A ga-ewepụta Onyinye Wine & Food Tourism na edemede 3: Innovation, Excellence Service, na Ahụhụ South South Africa nke Ezigbo E guzobewo ndị ọkachamara n'otu n'otu iji kpee niile 3 ikpe.
Tropical Storm Elsa gafere nso Florida eme na ...
Marriott Resorts na Mexico kwuputara onye isi ọhụụ ...
Bọ ụgbọ elu si Munich gaa Dubai na Lufthansa ugbu a